Global Voices teny Malagasy » Atahorana Ny Fisondrotam-bidin’ny Tapakila Noho Ny Nandravàn’i Shina Ny Ministeran’ny Fitaterana An-dalamby Novesaran-trosa · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 14 Marsa 2013 3:36 GMT 1	 · Mpanoratra Abby Liu Nandika avylavitra
Nanapa-kevitra i Shina ny handrava ny ministeran'ny fitaterana an-dalamby matanjaka saingy bokan-trosa tao aminy  mba hampakàrana ny fahafahan'ny governemanta miasa tsara sy hiadiana amin'ny kolikoly, hetsika iray izay ahiahian'ny maro amin'ireo Shinoa mpampiasa ny aterineto ho midika fisondrotam-bidin'ny tapakila atsy aoriana atsy.
Hivaky ho roa ilay ampihimamba goavana, ny fahefàna ara-pitantanana dia ho eo ambanin'ny Ministeran'ny Fitaterana. Orinasa iray kosa no hapetraka hampiodina ny raharaham-pitaterana ara-barotry ny lalamby Shinoa.
Namela trosa be mitentina 2.66 trillion yuan (420 lavitrisa dolara US ) ny Ministeran'ny Fitaterana an-dalamby, ary tsy mbola nanapa-kevitra ny amin'izay fomba ho entina miatrika izany ireo manampahefana, hoy i Wang Feng, tale lefitry ny Kaomitim-Pirenena Momba Ny Fanarenana ny Seha-Panjakana tamin'ny 11 Martsa 2013. Izay fanapahan-kevitra izay no “havela ho an'ny dingana manaraka,” hoy izy.
Efa ela ilay ministera no lasibatry ny fiampangàna azy ho manao kolikoly sy toerana anjakan'ny tantara ratsy. Tamin'ny 2011, niteraka  tsy hafaliana tety anaty aterineto ny fifandonan'ny fiarandalamby roa haingam-pandeha. Tamin'ny 2012, nametra-panontaniana  mikasika ilay tranonkala nampiasa loha azy ireo, fanaovana famandrihana tapakila, ny Shinoa, izay nandanian'ny ministeran'ny fitaterana andalamby vola mitentina 300 tapitrisa yuan (47.8 tapitrisa dolara US) ny nanangànana azy, hatramin'ny fanaovana lahatsary fampahafantarana azy izay nandaniana 18.5 tapitrisa yuan (2.94 tapitrisa) ny famokarana azy.
Noharabain'ireo media Shinoa ny fandravàna ilay ministera. Nanao fanmarihana ny  China Daily hoe:
Nitatitra momba ny fitaovana efa antitry ny Ministeran'ny Fitaterana andalamby ny televizionam-panjakana Jiangsu TV (dikasarin'ny fàfana youku) 
Ilay drafitra vao avy navoaka ho fanta-bahoaka momba ny fanavaozana ireo masoivohon'ny Filankevi-Panjakana dia mety tsy ho midadasika sy handeha lalina araka ny niheveran'ny sasany azy, saingy na miaraka aminà sarintsarim-pifanarahana ‘fisoloan-toerana’ aza, dia efa mba hetsika mendrika ho arahabaina izany.
Na izany aza, niteraka  [zh] firaradrarahanà valinteny tsy mahita afa-tsy ny lafiny ratsy ilay hetsika, tao amin'ny Sina Weibo, sehatra Shinoa malaza amin'ny fitorahana bilaogy kiritika. Maro no nanahy fa resaka fanondrotana vidinà tapakila amin'ny fiarandalamby io. Iray amin'ireo mpampiasa tranonkala i “Su Qun” no nanoratra hoe  [zh] :
Hivadika ho orinasa ny Ministeran'ny Fitaterana an-dalamby, izay zavatra tsy dia ho tsara loatra… Fahiny, ny olana dia hoe tsy afaka nahazo tapakila fotsiny isika, fa angamba amin'ny hoavy, mety tsy ho vitantsika ny hividy iray amin'izany… Tsy hiatrika fifaninanana aminà orinasa tsy miankina ilay orisana hisahana ny fitaterana an-dalamby, nefa hiatrika tsindry ara-toekarena ry zareo. Hanandrana fomba samihafa ry zareo handefasana an'ilay trosa be 420 lavitrisa dolara ho any amin'ny tapakilan'ny fiarandalamby. Efa nahazatra an-dry zareo ny nifangaroharo tamin'ny mpitantana. Efa tantara sisa izany ankehitriny. Ry zareo izao no lasa mpanjakan'ny ala, tahaka ireo orinasan-tsolika ihany.
Nampiakoako izany i  Laoxu [zh]:
Ny minisitra farany tao amin'ny Ministeran'ny Fitaterana An-dalamby, Sheng Guangzu, dia niteny fa ambany ny saran-dàlana. Amin'ny hoavy, hanitsy ny saran-dàlana hifanitsy amin'ny fepetran'ny tsena ry zareo. Ianareo ry zalahy no nitaky ny hitsaharan'ny Ministeran'ny Fitaterana An-dalamby; ankehitriny teraka ny ampihimamba mamiratry ny orinasam-panjakana. Atsy ho atsy dia horaofiny daholo ny tombontsoa eny amin'ny tsena…
“Wuyue Sanren” nikevitra  [zh] fa tetika fotsiny ilay hetsika mba hanilihana ilay trosa be misavovon'ny ministera:
Takatro ny antony nandravàna ny Ministeran'ny Fitaterana an-dalamby. Io tetika io no antsoina hoe “fandosirana amin'ny tetika tsara rindra”. Vantany vao rava, hanjavona ireo fitakiana ara-politika sy avy amin'ny fanehoan-kevitry ny daholobe. Satria efa tsy eo intsony ny ministera, tsy misy na iza na iza hahita zavatra hokianina intsony. Ny fandraisana lalan-jotra mitodika amin'ny tsena sy fametrahana ny trosa ho andraikitry ny orinasam-barotra iray dia mitovy amin'ny famotipotehana ireo renivola tsy mamokatra. Tetika tena mampihaiky io.
Lu Zhengwei, mpahay toekarena, dia nanamafy  [zh] ihany koa fa ny trosa midangana dia hery manosika ho amin'ny fanavaozana:
Hery manosika ho amin'ny fanavaozana ny Ministeran'ny Fitaterana an-dalamby ny trosa miavosa. Nanjary tantara be ny Ministeran'ny Fitaterana an-dalamby. Voatery tsy maintsy miditra amin'ny fanavaozana mitodika amin'ny tsena ireo departemanta voakasika, ka ny rehetra amin'izany dia natosiky ny trosa miavosa avokoa. “Manambadia vehivavy ratsy tarehy” no lojika tao ambadik'ilay fanavaozana nandritra ny 30 taona. Noho izany, ny hery manosika ny fanavaozana ny governemanta ato anatin'ny folo taona ho avy dia andrandraina ihany koa ho avy amin'ny fipatitahan'ny fatiantoky ny fitantanam-bola. Tahaka an'i Joseph Alois Schumpeter [mpahay toekarena] tany am-piandohan'ny taonjato faha-20 ihany, izay niteny hoe : ny Fitantanam-bola no fanalahidin'ny fahatakarana ny fiovan-drafitra rehetra.
Xiao Feng, mpanao gazety ao amin'ny New Weekly  [zh] no namintina hoe  [zh] :
Hibaby trosa goavana mitentina 2.66 trillion yuan(420 lavitrisa dolara US ) ilay orinasam-pitaterana an-dalamby vaovao, izay hitondra mankany amin'ny fisondrotan'ny vidin'ny tapakila. Io no endrika tranainy indrindra amin'ny “fanavaozana = fanondrotam-bidy”. Amin'ny anaran'ny fanavaozana, ny tena raharaha dia ny fisondrotam-bidy, tahaka izay ny fanavaozana ny resaka fitsaboana, ny fanabeazana ary ny trano fonenana. Tsy misy hafa amin'izay koa ny fanaparitahana ny Ministeran'ny Fitaterana an-dalamby.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2013/03/14/46817/
 handrava ny ministeran'ny fitaterana an-dalamby matanjaka saingy bokan-trosa tao aminy: http://ajw.asahi.com/article/asia/china/AJ201303120016
 hoy i : http://www.reuters.com/article/2013/03/11/china-railways-idUSL3N0C311U20130311
 Nanao fanmarihana ny: http://www.chinadaily.com.cn/cndy/2013-03/11/content_16296505.htm
 no nanoratra hoe: http://weibo.com/1156966391/zmUDPal9H
 Nampiakoako izany i: http://weibo.com/1358776365/zmYaVuVFU